ရွှေချည်ထိုး (Gold Embroidery) – MYANHOUSE
ရွှေချည်ထိုး (Gold Embroidery)
မြန်မာ့ရွှေချည်ထိုးသည် တော်ဝင်အနုပညာရပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ နန်းတွင်းတော်ဝင်မိသားစုနှင့် လူချမ်းသာတို့၏ အ၀တ် အထည်၊ အဆင်တန်ဆာမှ အစပြု၍ အလှဆင်သည့် ကားချပ်များအထိ ရွှေချည်ထိုးပညာဖြင့် ဖန်တီးခဲ့ကြသည်။ မြန်မာတို့၏ ရွှေချည်ထိုးပညာသည် လွန်ခဲ့သည့် နှစ်ပေါင်းတစ်ထောင်ခန့်မှစတင်ခဲ့သည်ဟု သမိုင်းအထောက်အထား အချို့တွင် ဖော်ပြထားသည်။ အစောဆုံး ရွှေချည်ထိုးလက်ရာကို ပျူခေတ် (အေဒီ ၈၀၀) ခန့်က တွေ့ရှိခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။ မန္တလေးမြို့ သည် ရွှေချည်ထိုးပညာရပ်ထွန်းကားခဲ့၊ ထွန်းကားဆဲ မြို့ဖြစ်သည်။
မြန်မာ့ရွှေချည်ထိုးသည် ကတ္တီပါစပေါ်တွင် ဖောင်းကြွရုပ်များ၊ ရွှေချည်ကြိုးများ၊ ပုလဲစေ့ ပုတီးစေ့များ၊ ကြေးကြယ် ဘော်ကြယ်များ၊ ဖန်ကျောက်များ၊ တစ်ခါတစ်ရံ အဖိုးတန်ကျောက်များဖြင့် ချယ်လှယ်ထားသည့် ပန်းချီပညာရပ်တစ်မျိုးဟု ဆိုရမည်ဖြစ်သည်။ ရှေးဘုရင်၊ မိဖုရားနှင့် တော်ဝင်မိသားစုတို့၏ ဦးခေါင်းအဆင်တန်ဆာ၊ အ၀တ်အစား နှင့် ခြေနင်းအထိ ရွှေချည်ထိုးပညာရပ်ဖြင့် ထည်ဝါစွာ ချုပ်လုပ်ခဲ့ကြသည်။ မြန်မာ့ရုပ်သေးအဆင်တန်ဆာများတွင်လည်း ရွှေချည်ထိုးပညာ ပါဝင်၏။
ရွှေချည်ထိုးကားချပ်များကို ဗုဒ္ဓ၀င်ဇာတ်တော်များ၊ မြန်မာ့ရိုးရာပွဲတော်များ၊ မင်းခမ်းမင်းနား၊ စစ်ထိုးစစ်ချီမှအစ ပုံဖော်၍ တန်ဆာဆင်ခဲ့ကြသည်။ ထို့အပြင် မြန်မာတို့ အထွဋ်အမြတ်ထားရာ ဆင်၊ ဒေါင်း နှင့် ခုနစ်နေ့ခုနစ်နံ အရုပ်များကိုလည်း ဟန်အမျိုးမျိုးဖြင့် ပြုလုပ်လေ့ရှိကြသည်။
ရွှေချည်ထိုးကားချပ်တစ်ခုရရှိရန် ပညာရှင်တစ်ဦးတစ်ယောက်တည်းဖြင့် ပြုလုပ်ရခြင်းမဟုတ်ဘဲ ပန်းချ၊ ပန်းဖြာ၊ အရုပ်သွတ် အစရှိသည့် အဆင့်တစ်ဆင့်စီအတွက် ပူးပေါင်းပြုလုပ်ကြရသည်။ ရွှေချည်ထိုးပညာရှင်တို့သည် ပန်းချီပညာကိုလည်း နားလည်ရ၍ အပ်ချုပ်ပညာကိုလည်း နိုင်နင်းရသည်။ ကတ္တီပါစကျတ်ထားသည့် လေးထောင့်ခွင်ကို ၀ိုင်းထိုင်၍ မနေမနား အာရုံစိုက်၍ လုပ်ဆောင်ကြရခြင်းဖြစ်သည်။
ရွှေချည်ထိုးကားချပ်ကောင်းတစ်ခုရရှိရန် ပန်းအစိတ်အကျဲနှင့် အဆင်တန်ဆာပေါ်မူတည်၍ အနည်းဆုံး တစ်ပတ်ခန့် ကြာညောင်းတတ်သည်။ သို့ဖြစ်သောကြောင့် ရွှေချည်ထိုးကားချပ်များ၊ အသုံးအဆောင်များသည် ယနေ့တိုင် အဖိုးထိုက် အဖိုးတန် သမိုင်းဝင်အနုပညာပစ္စည်းအဖြစ် ကျန်ရှိဆဲဖြစ်သည်။
Myanma Gold Embroidery (Shwe Che Hto)
Myanmar’s gold embroidery is one of royal decorative art. From clothing and accessories to wall backdrop for royal families and wealthy dispositions were created in gold embroidery technique. Historical facts show that gold embroidery have originated in Myanmar aboutathousand years ago and the earliest embroidered piece was in Pyu era (AD 800). Mandalay was and is still the center of gold embroidery to the date.
Gold Embroidery is sort of painting decorated with needle works, embossed figures, gold threads, seeds pearl and beads, sequins, glass cuts and sometimes even with precious gem on velvet sheet. From headgears and clothing to shoes of kings and queens and of royal family are magnificently made up in gold embroidery. And all Myanma puppets dresses are done in gold embroidery as well.
Embroidered backdrops, what we call embroidery paintings, are designed and decorated base on the stories of the previous lives of Buddha, Myanmar traditional festivals and ceremonies, royal ceremonies, battle fields and march to battle. Besides the figures of elephants, peacocks and the respective animals of7days are embroidered in different styles and shapes.
Embroidering isacollaborative work sharing different tasks such as sketching, needling, and embossing which can’t be done byasingle expert or artist. Gold embroidery artists are to be knowledgeable at painting and also manageable at needle works. It is the work of sitting focusing constantly at each side of stretcher which stretchedavelvet sheet on.
It takes at least one week to getawell embroidered piece according to the details and decorations. That is why Myanma gold embroidery still remain as highly valued historical art till today.
Author Kyaw LinnPosted on March 31, 2019 March 31, 2019 Categories Gold Embroidery
Previous Previous post: အုန်းခွံလက်မှု (Coconut Shell Art)
Next Next post: ကျောက်စိမ်း (Jade)